Hip-Hop သိန်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
Michelle • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:52 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒီအားတက်စရာဗီဒီယိုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. သင့်ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကနှင့်သူ၏ဘုန်းအသရေဘို့မိမိတို့ဘုရားသခငျပေးသောခွက်ကို အသုံးပြု. သင်တို့ကဲ့သို့သူတစ်ပါး၏ဓမ်မအမှုအတှကျဒါကြောင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကျေးဇူးတင်. သင်နှင့်သင့်မိသားစုများအတွက်ဆုတောငျးလကျြ!
W က. lynn Oriental • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:53 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဘာ?! အဘယ်သူမျှမသေး commented ထားပါတယ်? ငါ့ကိုပဲသူ့ကိုငါကိုချစ်ကြောင်းထို့နောက်ဆိုကြပါစို့. ဘုရားသခင်၏အံ့သြဖွယ်လူကို.